အမေရိကန်အစိုးရ ထောက်ပံ့ငွေ ဒေါ်လာ ( ၁၇၀၀ ) သွားထုတ်ရာမှ ဒေါ်လာ ၈ ဒသမ ၂ သန်း ကို ရရှိလိုက်သည့် အမျိုးသား – Na Pann San
အမေရိကန်အစိုးရ ထောက်ပံ့ငွေ ဒေါ်လာ ( ၁၇၀၀ ) သွားထုတ်ရာမှ ဒေါ်လာ ၈ ဒသမ ၂ သန်း ကို ရရှိလိုက်သည့် အမျိုးသား
အမေရိကန် တွင် ချားလ်ကယ်လ်ဗင် အမည်ရှိ အမျိုးသား ၁ ဦး သည် ပြီးခဲ့သည့် စနေနေ့ က ATM စက် သို့ သွားရောက်ခဲ့သော အခါ အိမ်ခန်းငှားခပေးရန် ငွေအချို့ ထုတ်ရန် ရည်ရွယ် ချက်ဖြင့် ဖြစ် သည် ။
အင် ဒီ ယာ နာပြည်နယ် နယူးချီကာဂိုမြို့ တွင် စေတနာ့ ဝန်ထမ်းမီး သတ်သမားတစ်ဦးအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသည့် ကယ်လ်ဗင်သည် အစိုးရ ၏ “ အသုံးစရိတ် ပံ့ပိုးမှု ထောက်ပံ့ငွေ အစီအစဉ် ” တစ်စိတ် တစ်ပိုင်းအရ သူ၏အကောင့်ထဲသို့ ဒေါ်လာ ၁,၇၀၀ တိုက်ရိုက် ထည့်သွင်းပေးခံထားရပြီးဖြစ်ကြောင်းကို ဖုန်းမှတစ်ဆင့် အကြောင်းကြား ခံထား ခဲ့ရပြီးဖြစ်သည် ။
ထို့ကြောင့် အသက် ၄၅ နှစ်ရှိ ကယ်လ်ဗင်သည် သူ ၏ MetaBank ကတ်အား အေတီအမ်စက်ထဲသို့ ထည့်သွင်းခဲ့ပြီး အများဆုံးထုတ်ယူနိုင်သည့်ပမာဏဖြစ်သော ဒေါ်လာ ၂၀၀ ထုတ်ယူ ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ပြေစာအား ဆွဲထုတ်လိုက်သော အခါ လက်ကျန်ငွေနေရာ တွင် ဒေါ်လာ ၈,၂၀၀,၀၀၀.၀၀ ကို တွေ့မြင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
“ကမ္ဘာကြီး ဘာတွေဖြစ် ကုန်တာလဲဗျို့..? တစ်ခုခုတော့ မှားနေပြီထင်တယ်နော်…။” ဟု ကယ်လ်ဗင်က စီအင်န်အင်န်သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ သူသည် အိမ်ငှားခ အတွက် ဒေါ်လာ ၈၀၀ လိုအပ်နေခဲ့သည်ဖြစ်သဖြင့် နောက်ထပ်ငွေထုတ်ယူမှု အနည်းငယ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
“ထပ်ထုတ်တော့လည်း ဒေါ်လာ ၈ ဒသမ ၂ သန်း ကျန်နေတုန်းပဲ။ ” ဟု သူက ဆိုသည် ။
အေတီအမ်စက် တစ်စုံတစ်ခု မှားယွင်းနေပြီကို သတိပြုမိရင်း သူက အေတီအမ်စက် ရှိရာ Family Express ဂတ်စ်ဆိုင်ရှိ ဝန်ထမ်း တစ်ဦးအား ထိုစက်နှင့်ပတ်သက်၍ အဆင်မပြေမှုတစ်စုံတစ်ရာကြားမိခြင်း ရှိမရှိ မေးမြန်းခဲ့သည် ။ ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးက မကြားမိကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပြီး ထိုသို့မေးမြန်းရသည့်အကြောင်းရင်းအား ပြန်လည်မေးမြန်းခဲ့သည်။
ကယ်လ်ဗင်က သူမအား ပြေစာကို ပြသလိုက်ရာ သူမက ပြေစာကိုတစ်လှည့် ကယ်လ်ဗင်ကို တစ်လှည့် အထပ်ထပ်ကြည့်ရှုပြီး “ ရှင်က မီလျံနာလား?” ဟု ကယ်လ်ဗင်အား မေးခွန်းထုတ်လိုက်သည် ။ထိုအခါ ကယ်လ်ဗင်က “အစ်မရယ် ကျွန်တော်သာ မီလျံနာဆို အိမ်ငှားခ အတွက် ဒေါ်လာ ၂၀၀ ထုတ်ဖို့ ဒီမှာ ရောက်နေမယ်လို့ ခင်ဗျားထင်လား…?” ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ယင်းနောက် ကယ်လ်ဗင်က ရဲကြပ်ကြီး တစ်ဦးဖြစ်သော သူငယ်ချင်းတစ်ဦးအား ဆက်သွယ်ခဲ့ရာ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက သူ့အား ထိုငွေ ကို စိုးစဉ်းမျှ အသုံးမပြုဘဲ တနင်္လာနေ့တွင် သက်ဆိုင်ရာဘဏ် သို့ အကြောင်းကြားရန် သူ့အား အကြံပေးခဲ့သည်။
ထို့နောက် MetaBank ဘဏ်မှပြန်လည်ဖြေရှင်းချက် အရ ဘဏ်စာရင်း တွင် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန မှ ထည့်ပေးသောငွေ ဒေါ်လာ ၁၇၀၀ သာ ပြကြောင်းနှင့် အေတီအမ်စနစ် တွင် ချို့ယွင်းမှုဖြစ်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း သိရသည် ။
သူ၏ ဘဏ်စာရင်း တွင် ငွေလက်ကျန်သည် ၁၃ ဒသမ ၆၉ ဒေါ်လာ ဖြစ်ပြီး ငွေလက်ကျန်အား ထို ၈ ဒသမ ၂ သန်းသာ အမှန်တကယ်ဖြစ်လိုက်ချင်သည်ဟု သူက ပြောကြားခဲ့ကြောင်းလည်း သိ ရသည် ။
Ref:( CNN )
အမရေိကနျ တှငျ ခြားလျကယျလျဗငျ အမညျရှိ အမြိုးသား ၁ ဦး သညျ ပွီးခဲ့သညျ့ စနနေေ့ က ATM စကျ သို့ သှားရောကျခဲ့သော အခါ အိမျခနျးငှားခပေးရနျ ငှအေခြို့ ထုတျရနျ ရညျရှယျ ခကျြဖွငျ့ ဖွဈ သညျ ။
အငျ ဒီ ယာ နာပွညျနယျ နယူးခြီကာဂိုမွို့ တှငျ စတေနာ့ ဝနျထမျးမီး သတျသမားတဈဦးအဖွဈ လုပျကိုငျနသေညျ့ ကယျလျဗငျသညျ အစိုးရ ၏ “ အသုံးစရိတျ ပံ့ပိုးမှု ထောကျပံ့ငှေ အစီအစဉျ ” တဈစိတျ တဈပိုငျးအရ သူ၏အကောငျ့ထဲသို့ ဒျေါလာ ၁,၇၀၀ တိုကျရိုကျ ထညျ့သှငျးပေးခံထားရပွီးဖွဈကွောငျးကို ဖုနျးမှတဈဆငျ့ အကွောငျးကွား ခံထား ခဲ့ရပွီးဖွဈသညျ ။
ထို့ကွောငျ့ အသကျ ၄၅ နှဈရှိ ကယျလျဗငျသညျ သူ ၏ MetaBank ကတျအား အတေီအမျစကျထဲသို့ ထညျ့သှငျးခဲ့ပွီး အမြားဆုံးထုတျယူနိုငျသညျ့ပမာဏဖွဈသော ဒျေါလာ ၂၀၀ ထုတျယူ ခဲ့သညျ။ ထို့နောကျ ပွစောအား ဆှဲထုတျလိုကျသော အခါ လကျကနျြငှနေရော တှငျ ဒျေါလာ ၈,၂၀၀,၀၀၀.၀၀ ကို တှမွေ့ငျခဲ့ရခွငျးဖွဈသညျ။
“ကမ်ဘာကွီး ဘာတှဖွေဈ ကုနျတာလဲဗြို့..? တဈခုခုတော့ မှားနပွေီထငျတယျနျော…။” ဟု ကယျလျဗငျက စီအငျနျအငျနျသတငျးဌာနသို့ ပွောကွားခဲ့သညျ။ မညျသို့ပငျဖွဈစေ သူသညျ အိမျငှားခ အတှကျ ဒျေါလာ ၈၀၀ လိုအပျနခေဲ့သညျဖွဈသဖွငျ့ နောကျထပျငှထေုတျယူမှု အနညျးငယျကိုပွုလုပျခဲ့သညျ။
“ထပျထုတျတော့လညျး ဒျေါလာ ၈ ဒသမ ၂ သနျး ကနျြနတေုနျးပဲ။ ” ဟု သူက ဆိုသညျ ။
အတေီအမျစကျ တဈစုံတဈခု မှားယှငျးနပွေီကို သတိပွုမိရငျး သူက အတေီအမျစကျ ရှိရာ Family Express ဂတျဈဆိုငျရှိ ဝနျထမျး တဈဦးအား ထိုစကျနှငျ့ပတျသကျ၍ အဆငျမပွမှေုတဈစုံတဈရာကွားမိခွငျး ရှိမရှိ မေးမွနျးခဲ့သညျ ။ ဝနျထမျးအမြိုးသမီးက မကွားမိကွောငျး ဖွကွေားခဲ့ပွီး ထိုသို့မေးမွနျးရသညျ့အကွောငျးရငျးအား ပွနျလညျမေးမွနျးခဲ့သညျ။
ကယျလျဗငျက သူမအား ပွစောကို ပွသလိုကျရာ သူမက ပွစောကိုတဈလှညျ့ ကယျလျဗငျကို တဈလှညျ့ အထပျထပျကွညျ့ရှုပွီး “ ရှငျက မီလြံနာလား?” ဟု ကယျလျဗငျအား မေးခှနျးထုတျလိုကျသညျ ။ထိုအခါ ကယျလျဗငျက “အဈမရယျ ကြှနျတျောသာ မီလြံနာဆို အိမျငှားခ အတှကျ ဒျေါလာ ၂၀၀ ထုတျဖို့ ဒီမှာ ရောကျနမေယျလို့ ခငျဗြားထငျလား…?” ဟု ပွနျလညျဖွကွေားခဲ့သညျ။
ယငျးနောကျ ကယျလျဗငျက ရဲကွပျကွီး တဈဦးဖွဈသော သူငယျခငျြးတဈဦးအား ဆကျသှယျခဲ့ရာ သူငယျခငျြးဖွဈသူက သူ့အား ထိုငှေ ကို စိုးစဉျးမြှ အသုံးမပွုဘဲ တနင်ျလာနတှေ့ငျ သကျဆိုငျရာဘဏျ သို့ အကွောငျးကွားရနျ သူ့အား အကွံပေးခဲ့သညျ။
ထို့နောကျ MetaBank ဘဏျမှပွနျလညျဖွရှေငျးခကျြ အရ ဘဏျစာရငျး တှငျ ပွညျတှငျးအခှနျမြားဦးစီးဌာန မှ ထညျ့ပေးသောငှေ ဒျေါလာ ၁၇၀၀ သာ ပွကွောငျးနှငျ့ အတေီအမျစနဈ တှငျ ခြို့ယှငျးမှုဖွဈသှားခဲ့ခွငျးဖွဈနိုငျကွောငျး သိရသညျ ။
သူ၏ ဘဏျစာရငျး တှငျ ငှလေကျကနျြသညျ ၁၃ ဒသမ ၆၉ ဒျေါလာ ဖွဈပွီး ငှလေကျကနျြအား ထို ၈ ဒသမ ၂ သနျးသာ အမှနျတကယျဖွဈလိုကျခငျြသညျဟု သူက ပွောကွားခဲ့ကွောငျးလညျး သိ ရသညျ ။